Maraykanka oo doonaya inuu duqaymo kadhan ah Alshabaab kasameeyo Kenya - Tilmaan Media
in AFRIKA, CAALAMKA
Maraykanka ayaa codsaday in dowladda kenya u ogolaato inay duqaymo kasamayn karaan gudaha dalka Kenya si loo wiiqo awoodda Alshabaab ee Kenya. Siduu qoray wargayska The New York Times ee kasoo baxa Maraykanka, Taliska Maraykanka ee Africa (AFRICOM) ayaa codsigaa soo gudbiyay.
Hadii Maraykanku ogolaanshaha helaan, duqaymaha qaarkood ayaa kadhici doona gobolka Waqooyi Bari Kenya ee Soomaalidu dagto.
Codsigaan ayaa yimid kadib weerarkii Alshabaab ay kuqaadeen saldhig Maraykanku kuleeyahay gobolka Laamuu bishii Juun ee lasoo dhaafay. Alshabaab ayaa sheegtay in weerarkaas ay Maraykanka ugu gaysteen khasaare laxaadle.
Siyaasiyiinta iyo hogaanka bulshada ee gobolka Waqooyi Bari ayaa muujiyay sidaysan raalli oga ahayn in dalabka Maraykanka. Dadka gobolka ayaa cabsi ka qaba in dhibaato naf iyo maal ba kasoo gaarto duqaymaha.
Sidoo kale waxaa jirta cabsi ah in duqaymaha Maraykanku dhalinyaro badan ku riixaan in ay ku biiraan Alshabaab iyagoo kacaraysan dhibaato laga yaabo inay bulshadooda soo gaaraan.
Dowladda Kenya ayaan wali jawaab kabixin dalabka Maraykanka ee ah in uu gudaha Kenya ka sameeyo duqaymo kadhan ah dhaqdhaqaaqa Alshabaab.